Markab kalluumeysi sharci daro ah ka waday xeebaha Somalia oo ciidan la’aan la soo qabtay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir ku xigeenka Kalluumeyisga Siciid Jaamac Max’ed Qaalib ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay markab si sharcidarro ah uga kalluumeysanayay xeebaha Soomaaliya.
Siciid Jaamac Max’ed Qaalib ayaa sheegay in markan lagu qabtay xeebaha magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Wuxuu sheegay in Wasaaradu ay ku biirtay Ururro Caalami ah oo ka dhisan ilaa iyo 8 dal oo iska kaashanaya la-dagaallanka Kalluumeysiga Sharci-darrada ah ee xeebaha.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaa ku daray in Markabkan uu isku dayay inuu Cumaan galo, balse markii uu ku arkay inuu qoraal ka yaallo uu u soo wareegay dhinaca dekeda Mombasa, isagoo intaasi sii raaciyay in ciidamo la’aan ay ku guuleysteen qabashada markabkani.
“Waxaa markabkan u siday Kalluun gaaraya illaa 30 Tan waxaana lagu ganaaxay lacag gaaraysa 65,000 oo dollar” ayuu yiri Siciid Jaamac Max’ed Qaalib.
Wasiir ku xigeenka ayaa u mahadcelinay dowlado iyo hay’ado caalami ah oo gacan ka siiyay la dagaallanka Kalluumeysiga Sharci-darrada ah oo Marakiibta shisheeye ay ka wadaan xeebaha Soomaaliya.
Waxaa uu ka codsaday inay ugu deeqaan qalabka ka Satalite-ka oo inoo fududeynaya ka hortagga kalluumeyisga sharci-darrada ah ee xeebaha dalka ka jira maadaama aysan Somalia heysan ciidan badeed oo ku filan ilaalinya xeebaha dalka.